Underrated Link Kuvaka Matekiniki Anoshanda Zvinoshamisa Zvakanaka | Martech Zone
Vatengesi veDhijitari vanovimba nechivakwa chekubatanidza seyakakosha nzira mukutsvaga injini optimization (SEO) kuwedzera yavo peji masosi pamapeji ekutsvaga enjini dzekutsvaga (SERPs). Nevashambadziri vanoshanda kuti vawane backlinks uye kugadzirisa saiti traffic, kugadzira vatungamiriri, uye kuzadzisa zvimwe zvinangwa, ivo vakadzidza kutendeukira kune dzinoverengeka nzira dzakakurumbira mubhokisi ravo rematurusi.
Chii chinonzi Backlink?
Iyo backlink ndeye chinodzvanya chinongedzo kubva kune imwe saiti kuenda kune yako. Tsvaga injini senge Google inoshandisa backlinks mukati meiyo chinzvimbo algorithm Nzvimbo dzinonyanya kukosha dzinoenderana nezviri mukati, dzinonyanya kutsvaga injini dzekutsvaga dzinotenda kuti ndedzechokwadi. Nekuda kweizvozvo, ivo vanozovaratidza kumusoro kumusoro mukutsvaga injini mhedzisiro mapeji (SERPs).
Chii chinonzi Link Kuvaka?
Batanidza chivakwa inzira iyo vaongorori veinjini dzekutsvaga vanoona backlinks yemasaiti akakodzera uye anokwikwidza, uye voona zano rekuyedza kuwana chinongedzo kubva kune yakanangwa saiti kudzokera kwavo. Nesimba rakaringana, uye akakodzera backlinks, webhusaiti inogona kuwedzera masosi ayo pamatanho akasarudzika uye kwese kutsvaga injini kuoneka kune domeini yayo. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti kuunganidza zvinongedzo kubva kune akavhurika, spammy, kana asiri-akakodzera masosi anogona kudzikisira pasi chinzvimbo chako - saka chinongedzo kuvaka kunofanirwa kutarisa kune akakosha kwazvo, epamusoro-soro masosi.
Ndedzipi nzira dzekuvaka dzekubatanidza?
Batanidza nzira dzekuvaka senge muenzi kutumira (uko zvemukati zvemukati zvakagadzirirwa hutungamiriri hwekufunga pane rakasiyana peji mukati meindasitiri), yakaputsika link yekuvaka (kutsiva backlinks dzakafa nezviri nani zvirimo), uye skyscraper (kugadzirisa uye kukwidziridza zviripo zvirimo nezvitsva uye zvakakwirira- mhando backlinks) zvazove zvekuenda-kune zviitwa muindasitiri nekuda kwavo kukuru.
Nekudaro, kushambadzira kwedhijitari kuri kuramba kuchinyanya kuwanda, varidzi vesaiti vazhinji uye vatenzi vewebhu varikutanga kuzara nemvura nezvikumbiro zvakafanana, zvichideredza mikana yezvikumbiro zvako zvekugamuchirwa. Kuti ugare kumberi kwemakwikwi, inogona kunge iri nguva yekuongorora kushomeka batanidza kuvaka matekiniki (ONA: Iyo backlink!) Iyo inoshanda zvakaringana-kana pamwe zvirinani zvirinani-kupfuura vamwe vanozivikanwa.
Iyo infographic pazasi (ONA: Zvakare, chinongedzo chekuvaka zano!) Inogovera mamwe mashoma-anoshandiswa matekiniki: mabvunzurudzo, mapeji ezvekushandisa, shamwari dzehukama, Batsira Mutori wenhau Kunze (HARO), kudzokorodza mufananidzo, zvinongedzo zvepamoyo, kubatanidza kunze / ego bait, 2nd-tier link yekuvaka, uye zviitiko zvezvenhau.
Iine huwandu hwenhanho yekutanga kune yepakati-nhanho kuurayiwa, zano rega rega rinokurukurwa padhuze nerondedzero yezviyero zvinoenderana zvinokubatsira kuti uwane backlinks zviri nyore.
Zvichienderana nezvido zvako, unogona kushandisa imwe kana mubatanidzwa weiyi nzira dzekubatanidza dzekuwedzera yako maricho ekushambadzira. Iwe unogona zvakare kushandisa aya matekiniki ekuwedzera ako anozivikanwa ekuvaka maitiro maitiro, achikubvumidza iwe kuzadzisa zvinangwa zvako zvirinani.
Kuenda kumberi kwepakeji pane yekutsvaga injini mhedzisiro mapeji (SERPs) kunogona kunetsa, asi nenzira dzakakodzera nemaitiro, une chokwadi chekuburitsa zvirinani uye zvinoshanda mhedzisiro. Kuuya nehurongwa hwakanyatsokodzera zvaunoda inyaya yekuedza zvinhu zvitsva uye kuona zvinoshanda zvakanyanya. Tora mukana wekugadzira nematanho ako ekuvaka ekushandisa uchishandisa nzira dziri pazasi.
Tags: Backlinkscontent strategiesego baitbatsira mutori wenhau kubudasei kutikudzokorora mufananidzolink buildingshamwari dzekubatanaq & amibvunzo nemhinduroyechipiri tier chinongedzo kuvakaspiralytics
Oscar ari Spiralytics ' njere Pamhepo PR Nyanzvi. Hukama hwake hunoshamisa hwekuvaka hukama hwakaremekedzwa nemakore ekuziva kubatsira makambani mune ese maindasitiri kubata yavo chiratidzo chiratidzo. Muchinda uyu anodya zvine hungwaru zvekusvitsa kuseni kwekuseni
Dhata-Dzinotungamirwa Matanho Gadzira Jedi-Chikamu Chikamu Ads